मानुएल रिवास, ग्यालिश साहित्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व मध्ये एक | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | जीवनी, लेखकहरू
मानुएल रिवास द्वारा उद्धृत।
मानुएल रिवास एक स्पेनिश लेखक हुन् जसले समकालीन गालिसियन साहित्यको सबैभन्दा प्रख्यात व्यक्तित्वहरु मध्ये एक मानिन्छ। आफ्नो क्यारियरको अवधिमा उनले स्वयंलाई उपन्यास, निबन्ध र काव्य रचनाहरूको बृद्धि गर्न समर्पित गरेका छन्; उनी आफैंलाई "लि gender्ग तस्करी" पनि भन्छन्। उनका धेरै जसो पुस्तकहरू 30० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ, र केहि विभिन्न अवसरहरूमा फिल्मको लागि अनुकूलित गरिएका छन्।
त्यस्तै, ग्यालिसियन लेखक पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो कामको लागि बाहिर उभिएका छन्। यो कार्य यसको संकलनमा प्रतिबिम्बित भएको छ: पत्रकारिता कथा हो (१ 1994 XNUMX)), जुन स्पेनको सूचना विज्ञानको मुख्य संकायमा सन्दर्भ पाठको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
1.1 पत्रकारिता कार्य
2 मानुएल रिवासका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
2.1 माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ? (१ 1997 XNUMX))
2.2 सिकर्मीको पेन्सिल (२००२)
2.3 कम आवाज (२०१२)
लेखक र पत्रकार मनुएल रिवास बारसको जन्म अक्टोबर २ 24, १ 1957 .XNUMX मा ला कुरुआमा भएको थियो। उहाँ एक नम्र परिवारबाट आउनुभयो, उनकी आमाले दुध बेच्नुभयो र बुबाले इँटेलेको रूपमा काम गर्नुभयो। विकृतिको बाबजुद पनि, उनले आईईएस मोनेलोसमा अध्ययन गर्न सके। बर्ष पछि - एक पत्रकारको रूपमा काम गर्दा - उनले माद्रिदको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटीमा सूचना विज्ञानमा डिग्री हासिल गरे।
रिवास एक पत्रकार को रूप मा एक लामो करियर छ; उनले दुबै लिखित मिडिया, साथै रेडियो र टेलिभिजनमा चकित पारेको छ। १ 15 वर्षको उमेरमा उनले अखबारमा पहिलो काम गरे ग्यालिसियन आदर्श। १ 1976 .XNUMX मा, उनले पत्रिकामा प्रवेश गरे तेइमा, पोष्ट ग्यालिश भाषामा लेखिएको.
स्पेनिश पत्रिकामा उनको क्यारियर बाहिर छ १ 16 परिवर्तन गर्नुहोस्, जहाँ उनी उप निर्देशकको रूपमा समाप्त भयो र को संस्कृति क्षेत्र को प्रभारी बेलुन। रेडियो क्षेत्रमा यसको सहभागिताको बारेमा, यो २०० 2003 मा फेरि खोलियो - सँगै जुरक्सो साउटो- Cuac एफएम (ला कुरुआ समुदाय रेडियो)। हाल उनी अखबारका लागि लेखकको रूपमा काम गर्छन् देश, काम जुन उनी १ 1983 .XNUMX देखि गर्दै आएका छन्।
रिवासले first० को दशकमा पहिलो कविता लेखेका थिए, जुन उनले समूहको समरूप पत्रिकामा प्रकाशित गरे लोइया। यसको चालको क्रम भर एक कविको रूपमा9कविता प्रस्तुत गरेको छ र एक मानवशास्त्र भनिन्छ: रातको शहर (१ 1997 12)) भनिएको पुस्तक डिस्कसँग पूरक छ, जसमा तिनी आफैंले आफ्ना १२ वटा रचनाहरू सुनाउँछन्।
त्यस्तै गरी लेखकले १ 19 प्रकाशनहरूसहित उपन्यासहरूको सृजना गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। यस विधामा उसको पहिलो कामको नाम छ एक मिलियन गाई (१ 1989 XNUMX)), जसले कथा र कविताहरू समावेश गर्दछ। यस कामको साथ, रिभास पहिलो पटक गैलिशियन कथा आलोचनाको पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो।
आफ्नो क्यारियर को समयमा उनले धेरै रचनाहरू प्रकाशित गरेका छन् जसले उनलाई कुख्यात बनाएका छन्, केवल कथाहरूको संग्रह जस्तै माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ? (1995)। यसका साथ उनले राष्ट्रिय कथा पुरस्कार (१ 1996 1995)) र टोरेन्टे ब्यालेस्टर (१ XNUMX XNUMX।) प्राप्त गरे। यस भित्र संग्रह हो: पुतली को जीभ, छोटो कथा १ 1999 2000 in मा फिल्म अनुकूलित र २००० मा सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथाका लागि Goya पुरस्कार विजेता।
उहाँको सबैभन्दा प्रासंगिक कार्यहरू मध्ये हामी उल्लेख गर्न सक्छौं: सिकर्मीको पेन्सिल (1998), हराएको आगो (2002), हामी दुबैजना (2003), सबै कुरा मौन छ (2010) y कम आवाज (२०१२) लेखकले प्रस्तुत गरेको अन्तिम पुस्तक हो अनुमति र अन्य पश्चिमी कथाहरू बिना बाँच्न (२०१)), जुन तीन छोटो उपन्यासहरू मिलेर बनेको छ: हेजहोगहरूको डर, अनुमति बिना बाँच्न y पवित्र समुद्र।
मानुएल रिवासका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ? (1997)
यो १ 17 कथाहरू मिलेर बनेको हो जुन मानव सम्बन्धको बारेमा विभिन्न विषयवस्तुहरू वर्णन गर्दछ, दुवै परम्परागत र वर्तमान। यस नाटकमा लेखकको पत्रकारिताको भावना झल्किन्छ, जहाँ सबै कथाहरूमा प्रेम आधार हुन्छ। यो भावना विभिन्न पक्षहरु मा देखाइएको छ: प्लेटोनेटिक बाट दुखद हार्टब्रेक सम्म।
केहि यी मध्ये कथाहरूको आनन्ददायी र हास्य स्वर छ, तर अरूले बलियो विषयवस्तुहरू छान्छन्, वर्तमान वास्तविकताको प्रतिबिम्ब। यी कथाहरूमा तारा लिने मानिसहरू सामान्य र सरल छन्, जस्तै: यात्री, एक दुधमाई, एक जवान संगीतकार, बच्चाहरू र उनीहरूको सब भन्दा राम्रा साथीहरू; प्रत्येक एक विशेष अपील संग।
कथाहरू मध्ये, निम्नलिखित बाहिर खडा: पुतलीको जिब्रो, एक शिशु र उसको शिक्षक बीचको कथा, जो १ 30 s० को विनाशबाट प्रभावित छ। यो कथा सफलतापूर्वक एन्टोन रेक्साले ठूलो स्क्रिनको लागि रूपान्तरण गर्‍यो। अन्तमा, यो नोट गर्नु पर्दछ कि यो संकलन 30० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको थियो र लेखकलाई साहित्यिक संसारमा चिन्न अनुमति दिइयो।
तिमी मलाई के चाहन्छौ, माया? ...
का कथाहरू माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ? (1997):
"माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ?"
"धुंध मा एक sax"
"तिमी धेरै खुसी हुनेछौ"
"मिस्टर र आइरन मेडन"
"हवानाको विशाल कब्रिस्तान"
"पाइरेट प्यान्टमा केटी"
"चमगादुरका लागि सेतो फूल"
"समयको साथ बुद्धिको आगमन।"
सिकर्मीको पेन्सिल (2002)
यो पनि एक रोमान्टिक उपन्यास हो सन् १ 1936 .XNUMX मा स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेलाको जेलका गणतन्त्र कैदीहरूको वास्तविकता देखाउँदछ। कथा पहिलो र तेस्रो व्यक्तिमा दुई मुख्य पात्रहरू द्वारा वर्णन गरिएको छ: डा। डेनियल दा बार्का र हर्बल। साथै कथानकको महत्त्वपूर्ण अंश: मारिसा मल्लो र पेन्टर - कैदी जसले सिकर्मीको पेन्सिलका साथ विभिन्न दृश्यहरू चित्रण गर्दछ।
यस उपन्यास मा डा। डेनियल दा बार्का prep रिपब्लिकन— र युवा मारिसा मल्लो बीचको प्रेम कहानी प्रस्तुत गरिएको छ। दा बार्का आफ्नो राजनीतिक विचारहरु र कार्यहरु को कारण जेल छ। यसले ती दुई बिचको सम्बन्धलाई जटिल बनाउँछ, किनकि उनीहरूले उनीहरूको प्रेमको लागि संघर्ष गर्नुपर्दछ, उनीहरूको भावी विवाह टाढामा र सम्पूर्ण देश बस्ने वास्तविकताका लागि।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ कैदी हर्बल छ, जो जेलमा दा बार्कालाई भेट्छ र उसलाई व्याकुल बनाउँछ। यो अधिकारी एक विचलित व्यक्ति हो, जसले यातना र दुर्व्यवहारको आनन्द लिन्छ, र जेलमा धेरै जसो मृत्युदण्डहरू पनि गरिरहेछ।
चित्रकारआफ्नो पक्षका लागि, आफ्नो विशाल चित्रण प्रतिभा को बाहिर खडा छ। उ पेर्टीको डे ला ग्लोरिया आकर्षित गर्नुभयो र त्यहाँ उनले आफ्ना दुर्व्यवहार भएका साथीहरूको प्रतिनिधित्व गरे। काम केवल एक सिकर्मीको पेन्सिलले गरिएको थियो, जुन हर्बलले कार्यान्वयन गर्नु भन्दा केही समय पहिले उहाँबाट लिइएको थियो।
कथा अगाडि बढ्दै जाँदा, डाक्टरलाई मृत्युदण्ड सुनाईयो। मृत्युदण्ड दिन अघि उनी हर्बलले धेरै दुव्र्यवहार भोग्नु परेको छ, जसले सजाय समाप्त हुनुभन्दा अघि उनको जीवन अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दछ। कठिनाइको बावजुद, ऊ बाँच्नको लागि प्रबन्ध गर्दछ र आफ्नो जीवनको प्रेमसँग विवाह गर्ने आफ्नो इच्छालाई पूरा गर्दछ। वर्षौंपछि, उसले आफ्नो स्वतन्त्रता पाउँदछ र ल्याटिन अमेरिकामा निर्वासनमा जान्छजहाँबाट उनले आफ्नो अन्तर्वार्तामा कथाको अंश बताउँदछन्।
सिकर्मीको पेन्सिल ...
यो लेखक र उनकी बहिनी मारियाको अनुभव, बाल्यावस्थादेखि ला कुरुआमा वयस्कसम्मको आत्मकथात्मक कथा हो। La ईतिहास २२ छोटो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ, शीर्षकका साथ यसले यसको सामग्रीलाई हल्का प्रस्तावना दिन्छ। उपन्यासमा, नायकले आफ्नो परिवारलाई आफ्नो डर र बिभिन्न अनुभवहरू देखाउँछन्; यो धेरै दुखी र उदासीन टोनको साथ।
मानुएल रिवास ग्यालशियन संस्कृति र ल्याण्डस्केपमा विशेष जोड दिएर परिवारसँगै उनको बाल्यकालका सम्झनाहरू। उसको जीवनका धेरै परिदृश्यहरू संक्षिप्त रूपमा वर्णन गरिएको छ, स्पष्ट मिश्रित भावनाहरूको साथ।
कथा मा मारिया बाहिर देखिन्छ - उनको प्रिय बहिनी-, जसलाई उनले विद्रोही युवतीको रूपमा चिह्नित चरित्रको रूपमा देखाउँछन्। खेलको अन्तमा उनलाई हार्दिक सम्मान गरियो, एक भोकग्र क्यान्सर पीडित पछि उहाँ मरे।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » मानुएल रिवास